Maitiro ekudzima yako Spotify account pasina kufa mukuyedza | IPhone nhau
Maitiro ekudzima yako Spotify account pasina kufa mukuyedza
Spotify parizvino ndiyo inotungamira yekushambadzira mimhanzi sevhisi, zvisinei, nekuuya kweApple Music, vazhinji venyu munogona kunge makaisa parutivi nechimwe chikonzero kana chimwe. Kana isu tisingashandise sevhisi, isu hatina chikonzero chekuenderera tichichengeta dhata redu kumaseva avo, nekuwedzera Spotify ndeimwe yemakambani asingazeze kutitumira maemail nguva dzose kutiyeuchidza kuti varipo. Kune zvese izvo uye zvimwe, MuPadad Nhau nhasi tiri kuzokudzidzisa maitiro ekudzima yako Spotify account, uye nekuteerera, nekuti hazvisi nyore, vakomana vanobva kuSpotify havadi kuti uende. Kana kukanzura kunyoreswa kweprimiyamu idambudziko, batisisa nekuti idzi Spotify dzinonyatsoziva nzira yekuita iwe kuneta kwekuyedza.
Chekutanga pane zvese, usatsvage, tevera iyi dzidziso uye mahukama ayo, nekuti kana muchikamu chekubatsira, kana neemail kana muzvikamu zvekubata iwe unozogona kudzima yako account yeSpotify pasina kuburitsa yakawanda yemusoro uye kurasikirwa kwekufa nguva , kiyi iri mune yekubatanidza iyo iwe yaunongowana chete mumaforamu ekutsigira eUnited States uye neiyo yakaoma Chirungu, kunyangwe kana kamwe tiri mukati mekubatanidza tichazokwanisa kuenderera nematanho echiSpanish. Isu tinosiya chinongedzo chiri mubvunzo apa pazasi.
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kupinda muSpotify webhusaiti ine iyo account iwe yaunoda kudzima uye kana zvapera, tora iyi link:
Kana tangopinda mukati, tichawana mhando yefomu yekubatana iyo pachokwadi isiri, sezvo ichatibvumira kudzima account yedu uye rese data rine hukama nazvo, pamwe nehukama neFacebook. Wanga uchifunga kuti izvi ndizvo here?Kwete zvachose, mutambo uchangotanga.
Mushure mekuvhenekera kuburikidza neano anoshamisa mazhinji esarudzo, isu tinoona kuti hatigone kudzima account yedu otomatiki, zvinotipa mukana wekuenda kuforamu yavo yekutsigira (, que hazvigadzirise chero chinhu kwauri) kana kutumira email. Iyi ichava yedu sarudzo yakasarudzwa sezvatinoona mune iyo skrini.
Asi uku hakusati kuri kupera, kushaya kwekuremekedza kwekufunga kwedu kuchiri kuuya, nenzira yeemail zvakare. Isu tinogamuchira email kanenge pakarepo ne "mhinduro" mbiri dzisina kudaro., redirect us to support. Nekudaro, usaore moyo, pindura zvakananga kubva kune wako mutengi kune ino email uchizivisa kuti iwe uchiri kuda kudzima zvachose account yako kubva kumaseva ayo pasi peOrganic Mutemo weDziviriro yeData, nekuti izvi iwe unozopa dhata iyo icharerutsa kuzivikanwa kweakaundi yako zvakadaro sezuva rako rekuzvarwa.
Mune imwe nguva yemaawa makumi mana nemasere iwe uchagamuchira email inosimbisa kuti yako Spotify account yakadzimwa zvachose. Iye zvino unogona kudzima iyo Spotify application kubva kune yako iPhone, iPad, Mac uye Apple TV. Izvo zvave zvisiri nyore zvachose, asi neiri dzidziso tinotarisira kuti takabatsira vanhu vazhinji vakarega kuedza kudzima yavo Spotify account, izvo zvisiri nyore chaizvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima yako Spotify account pasina kufa mukuyedza
Kreylin Anderson akadaro
Ivo havana kunditumira chero maemail, mirira uye mira uye ini handina kumbogamuchira chero chinhu :)
Pindura Kreylin Anderson
Fitbit anga ari SmartWear wesarudzo ino yeKisimusi
Apple inonyatsopinda chaiyo chaiyo muna 2016